नाकामा संयुक्त गस्ती शुरु
नेपाल समाचारपत्र, बाँके । बाँकेमा संयुक्त गस्ती शुरु गरिएको छ । डेढ हप्ता अघि सीमावर्ती दुई देशका अधिकारीहरुले गरेको निर्णय अनुसार बाँकेको जमुनाहा–साईगाउँ खण्डमा मंगलबार संयुक्त गस्ती गरिएको हो ।
नेकपाका जिल्ला संयोजक पक्राउ
इलाम, २३ जेठ । निर्वाचन विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्लास्तरीय नेतालाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । नेकपाका जिल्ला संयोजक पुष्प भट्टराईलाई सोमबार प्रहरीले धोबीधारा क्षेत्रबाट
काठमाडौँ, २३ जेठ । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मेलम्ची आयोजनालाई समयमा सक्नका लागि कुनै पनि पक्षलाई ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले आज मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको बिदाइका लागि
वीरगन्ज, २३ जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भर्ना गरिएको म्यादी प्रहरीले जथाभाबी रकम उठानन थालेपछि पर्सा जिल्लामा सर्वसाधारण आतङ्कित भएका छन् । नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र इनर्वा, छपकैया, सिरसियालगायत ठाउँमा
ठेकेदारको लापरवाहिले स्वास्थ्य चौकिको भवन अधुरै
सरिता चलाउने, सल्यान । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालीकाको घाँझरीपिपल ७ मैदु पोखरीमा निमार्ण्िधन स्वास्थ्य चौकि भवनको काम ५ वर्ष सम्म पनि अधुरै रहेको छ । स्वास्थ्य चौकिको नयाँ भवन नवन्दा अस्पतालका
विद्यालयको छाना उडाउदा पढाइमा समस्या
सरिता चलाउने, सल्यान । सल्यानको एक बिद्यालयमा हावाहुरीले छाना उडाउदा पठनपाठनमा समस्या देखिएको छ । शिशु जागरण मा.वि. खोरबारेको छाना हावाहुरीले उडाउदा पठनपाठनमा समस्या देखिएको हो । बेलुका २ घण्टा
चोरी डकैती गर्ने गिरोह पक्राउ
बुटवल, २३ जेठ । रुपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणका घरमा पसेर चोरी डकैती गर्ने गिरोहको नाइकेसहितलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको छ । प्रहरीले गिरोहको नाइकेसहित चोरी गरेको धनमाल सस्तोमा
रसुवा, २३ जेठ । पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड मन्दिरमा यस वर्ष गङ्गा दशहरा पर्वमा भक्तजनले करिब ३० हजार भेटी चढाएका छन् । गोसाइँकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डिएमका अनुसार भेटी
भौतिक पुर्वाधारको लागी आएको ६० लाख खर्च गर्न सकस
धनवीर दाहाल, रुकुम । आर्थिक बर्षको अन्तिम तिर जिल्ला अस्पताल रुकुमको भौतिक पुर्वाधार निमार्णका लागी आएको ६० लाख रकम खर्च गर्न अस्पताललाई सकस भएको छ । टेन्डर गर्नको लागी पनि
रोल्पा, २३ जेठ । रोल्पामा जबर्जस्ती करणीका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउने क्रम बढेको देखिएको छ । जबर्जस्ती करणीबाट पीडितले खुलेर उजुरी दिन थालेका कारण यसरी उजुरीको सङ्ख्या बढेको हो
गुण्डा नाइके गोर्खाली पक्राउ
नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं काठमाडौं प्रहरीले राजधानीका चर्चित डन राजु गोर्खाली र उनको सहयोगीलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले गोर्खाली र उनका सहयोगी देवेन्द्र सुवेदीलाई पक्राउ गरेको हो। राजधानीमा
शिक्षा नियमावली नसच्याए आन्दोलनको चेतावनी
नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं प्याब्सन र एन प्याब्सनले तत्काल शिक्षा नियमावली–२०७३ नसच्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। दुवै संगठनले हिजो सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो चेतावनी दिएको हो। ५ दिनअघि पारित
मनसुन चाँडै सक्रिय हुने,चुनावको बेलामा के होला अहिले नै भन्न कठिन
टीका बन्धन⁄प्रशान्त वली काठमाडौं यस पटक मनसुन नेपालमा विगतका वर्षहरूभन्दा केही दिन छिटो भित्रिने भएको छ। मनसुन यही साता भित्रिने भएपछि आगामी असार १४ गतेका लागि तय गरिएको दोस्रो चरणको
ओली निवासमा पुगे कांग्रेसका तीन नेता
भक्तपुर, (नेस) नेपाली कांग्रेसका तीन जना नेता र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सोमबार ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएको छ। संसद् सुचारु गर्नका लागि भएको छलफलमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र
पर्यावरणको संरक्षण जरुरीः राष्ट्रपति
नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेका बेला जैविक विविधतामा सम्पन्न नेपालले सुन्दर भविष्यका लागि वनको दिगो संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोड दिनुभएको छ। वातावरणलाई सन्तुलन राख्दै विकास
क्लिन काठमाडौं अभियान, पहिला चेतावनी, त्यसपछि कारबाही
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं काठमाडौं महानगपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो फाइलमा काठमाडौंलाई क्लिन सिटी बनाउने योजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसलगत्तै महानगर वातावरण विभागले काठमाडौं शहर
न्यायपालिकाको फैसलालाई एमालेले स्वीकार गर्छ -रावल
काठमाडौँ, २२ जेठ । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले आफ्नो पार्टीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलालाई स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता रावलले भरतपुर
विभूषण र पदक – यथार्थ एउटा हल्ला अर्कै
काठमाडौँ, २२ जेठ । राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महानुभावलाई राष्ट्रिय दिवसमा सरकारले विभूषणहरुबाट पुरस्कृत गर्दा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् । नवौँ गणतन्त्र दिवस, २०७३
यार्सा संकलनमा जानेहरुको संख्या घट्यो
बीरबहादुर बम, मुगु । जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ्ग गाँउपालिका —२ मुगु गाँउका बिभिन्न पाटन क्षेत्रमा पाईने यार्सागुम्बु संकलनमा जानेहरुको संख्या अगिल्लो बर्ष भन्दा यो बर्ष घटेको छ । मुगम कार्मारोङ्ग गाँउपालीकाको
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णयलाई तीन दिनसम्म कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नामममा मौखीक रुपमा अन्तरिम आदेश दिएको भएपनि लिखित रुपमा